मोबाइलको लतः ‘गेमिङ डिसअर्डर’को खतरा - Everest Dainik - News from Nepal
मोबाइलको लतः ‘गेमिङ डिसअर्डर’को खतरा
काठमाडौं, साउन २० । के तपाईंका बालबालिका मोबाइलमा गेम खेल्ने, टिकटक बनाउने या भिडियो हेर्ने गर्छन् ? यस्तो धेरै मात्रामा गरे उनीहरूलाई मानसिक रोग ‘गेमिङ डिसअर्डर’को समस्या हुनसक्छ । अहिले धेरैजसो बालबच्चा ‘गेमिङ डिसअर्डर’को सिकार हुँदै गएको मनोविज्ञहरूको भनाइ छ ।
याे पनि पढ्नुस तपाइको बच्चामा मोबाइलको लत छ? होसियार ! ‘गेमिङ डिसअर्डर’ होला
बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रज्ञा प्रधानका अनुसार बच्चाले नखाएर मात्र शारीरिक विकास नहुने होइन, गेमिङ डिसअर्डरको समस्याले पनि नकारात्मक असर पारेको हुन्छ । गेम खेलेपछि बालबालिकालाई समयमा भोक नलाग्ने, भोक लागे पनि खान मन नगर्ने र आफूले के खाएको थाहासम्म नपाउने अवस्था हुने उनको भनाइ छ ।
“मोबाइलसँगै भोक र निद्रा हराउने भएपछि कसरी शारीरिक विकास हुन्छ रु”, उनी प्रश्न गर्छिन् “बालबालिकालाई मोबाइलको लत लगाउनेमा अभिभावकको कमजोरी हुन्छ । ”
उनका अनुसार छोराछोरी घुक्र्याउँछन्, रिसाउँछन् अनि फकाउनु पर्यो भने मोबाइल खेल्न दिन्छौँ । कुनै काम लगाउनु पर्यो भने पनि त्यो काम गर्यौ भने मोबाइल खेल्न दिन्छु । खाना खान मन गर्दैनन् भने अहिले खाना खायौ भने मोबाइल खेल्न दिन्छु अथवा मोबाइल हेर्दै खाऊ भन्ने चलन छ ।
डा।. अधिकारीले धेरैजसो अभिभावकले छोराछोरी फकाउन मोबाइलकै भर लिने गरेको जानकारी दिइन् । “मोबाइलमा हात परेपछि बच्चाहरू गेम खेल्न, भिडियो हेर्न तथा टिकटक बनाउन थाल्छन् । यसरी मोबाइलमा झुम्मिएपछि उनीहरू आफैँलाई भुल्छन्”, उनी थप्छिन्, “एकै ठाउँ घण्टौँ बसेको पनि उनीहरूले पत्तो पाउँदैनन् । ”
भोक लागेको, आफ्नो अघिल्तिर को आयो, को गयो, के भइरहेको छ रु केही पनि थाहा पाउँदैनन् किनभने उनीहरूको आँखा मोबाइलको स्क्रिनभित्र हुन्छ । मोबाइलमा गेम जति खेल्यो, उति खेल्न मन लाग्छ भन्दै डा। प्रधानले स्पष्ट पारिन्, “भिडियो जति हेर्यो, उति हेर्न मन लाग्छ । यही कारण मोबाइल मोह पलाउँछ तथा लत लाग्छ । ”
बच्चाहरू हर क्षण मोबाइलकै बारेमा सोच्न थाल्छन् । उनीहरू फुर्सद पाउनासाथ मोबाइलमा झुम्मिन्छन् । उनीहरूको पढाइ, सोचाइ र दिनचर्या नै प्रभावित हुन्छ । सेभ चाइल्ड नेटका प्रमुख अनिल रघुवंशी भन्छन्, “कुनै पनि कुराको कुलत राम्रो हुँदैन । मोबाइलको कुलतले पनि बच्चालाई नराम्ररी बिगार्ने गर्छ । ” यो समाचार गोरखापत्रबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: खतरा, गेमिङ डिसअर्डर, मोबाइलको लत